पूर्ण क्षमता Boguchany HPP मा रूस मा जुन 2016 को अन्त्यमा, मा निर्मित नयाँ थियो को ANGARA नदी, को taiga-वन क्षेत्रमा यसको मुख बाट 444 कि। यो शक्ति स्टेशन देश मा5औं छ, र आधुनिक उपकरण संग सम्बन्ध मा पहिलो सब।
कम्पनी को ठेगाना
शहर Kodinsk Kezhemskogo जिल्ला, क्रास्नायार्स्क क्षेत्र, बायाँ बैंक, संयुक्त आधार नम्बर 1, भवन 1 को निर्माण आधार - "Boguchany HPP" को सही ठेगाना। संगठन को फोन नम्बर: (39143) 7-13-93। साथै, जानकारी ई-मेल secrdir@boges.kodinsk.kras.ru मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। कम्पनी सूचकांक: 663.491।
को Boguchany जलविद्युत् बोट को निर्माण कार्य स्टेशन को पहिलो बिल्डर्स संगठन "Bratskgesstroy" को कर्मचारीहरु थिए, 1969. मा ऊर्जा को सोभियत संघ मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तथ्य, देश को लागि यो महत्त्वपूर्ण सुविधा को धेरै निर्माण 1974 मा सुरु गरिएको छ। हामी Ust-Ilimskoy HPP माथि अवस्थित वस्तु तिनीहरूलाई पठाउनुभयो। यसको निर्माण बस यो समयमा पूर्ण यसलाई समाप्त भएको थियो।
परियोजना क्षमता बोट को अनुसार यो 3000 मेगावाट हुनु थियो, र दबाव स्तर जलविद्युत परियोजना को पूरा 1992. लागि निर्धारित थियो 208 मिटर को चिन्ह पुग्न अपेक्षा गरिएको छ। तर, दुर्भाग्य, देश अन्तिम शताब्दीको अन्त मा कठिन अवस्था अनुमति थिएन अन्त हाम्रो योजना ल्याउन। कारण स्रोतहरू कमी गर्न स्टेशन को निर्माण को गति बिस्तारै अस्वीकार गर्न थाले, र 1994 मा यो वस्तुतः स्थिर थियो।
देश को पछि नेतृत्व (लागत कम गर्न) दुई चरणमा स्टेशन को परियोजना निर्माण छलफल भएको थियो। तर, अनुमोदन Glavgosekspertizy उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। स्टेशन को निर्माण सार्वजनिक-निजी साझेदारी को रूपरेखा मात्र 2007 मा भएको थियो फेरि सुरु गर्न। को Boguchany HPP पुन: खोल्न इरादा पुष्टि एक ज्ञापन पत्र, कम्पनी "Rusal" र राव "रूस को UES" त्यो अघि दुई वर्ष हस्ताक्षर भएको थियो। पूरा स्टेशन को सुरुमा उनको इच्छुकता 58% थियो। पहिलो दुई 2012 मा जलविद्युत Boguchany जलविद्युत् बोट धारण थिए
Boguchany HPP, फोटो पृष्ठमा प्रस्तुत छ, जो साँच्चै महान् को वस्तु हो। rockfill (1961.3 मिटर) र ठोस (828.7 मिटर) - यसको निर्माण दुई ठूलो बाँध समावेश छ। तसर्थ, समग्र छुट्टी स्टेशन अगाडि लम्बाइ 2690 मिटर छ। मा दुवै Dams हाल Motorway। अर्थात् HPP अझ विश्वसनीय र ANGARA, 130 किमी को एक अर्धव्यास मा केवल एक मार्फत एक पुल रूपमा सेवा गर्दैछन्।
स्टेशन बाँध दुई स्पिलवे छ। पहिलो (तल-प्रकार) 7060 मिटर3/ को को क्षमता द्वारा विशेषता छ। दोस्रो स्पिलवे (सतह) 90 मिटर को एक लम्बाइ छ र therethrough पारित स्ट्रिम बुझाने गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो सुविधा को आफ्नो विशिष्ट डिजाइन Powerhouse। यो बाँध को स्टेशन भाग पछि स्थित छ। निर्माण को लम्बाइ साथ9खण्डहरू, 333 मेगावाट क्षमता संग एउटा ठाडो हाइड्रोलिक एकाइ लागि सेट गरिएको छ प्रत्येक जो विभाजन गरिएको छ। Rotatable पानी प्रवाह कल जेनेरेटर actuated 370 एमवीए। तिनीहरूले बिजुली 500 केभी र 220 केभी को चरण-डाउन ट्रांसफार्मर आपूर्ति छ छन्। को बन्द प्रकार switchgear मार्फत शक्ति स्टेशन को जारी, को ANGARA को बाँकी बैंक मा कार्यालय र उत्पादन निर्माण आसन्न।
संयुक्त क्षमता एकाइहरु Boguchany HPP जस्ता महान् संरचना, हाल 3,000 मेगावाट मा खडा। Angarskaya नयाँ स्टेशन खपत क्रास्नायार्स्क क्षेत्र कुल बिजुली को 20% पैदावार। मात्र 2016 को पहिलो क्वाटरमा HPP यो 3,126 अर्ब kWh को मात्रा मा राखे।
। 77 मिटर चौडाइ उत्तरार्द्ध 20 मिटर को स्तर ल्याइएको र यसको निर्माण माटो3को 30.5 मिलियन क्यूबिक मिटर को अर्डर गरे थियो - यो बाँध ठोस स्टेशन 96 मिटर, थोक को सबैभन्दा ठूलो उचाइ
आयोजकहरु HPP निर्माण
सुरुमा, देश को अर्थव्यवस्था लागि यो महत्त्वपूर्ण स्टेशन को निर्माण मा निर्णय पहिले नै उल्लेख रूपमा, लगियो, ऊर्जा को सोभियत संघ मंत्रालय। भनिन्छ "Boguchangesstroy" वस्तु बेला सम्मानित गरिएको थियो। यो संगठन को आधारमा 1993 मा "Boguchangesstroy" को गठन। 2002 मा, कम्पनी आफ्नो नाम परिवर्तन गरियो। वर्तमान मा, वस्तु JSC "Boguchany HPP" को रूपमा दर्ता गरिएको छ।
"RusHydro" र कम्पनीहरु बीच 2006 को वसन्त मा "Rusal" एक सम्झौता "Bema" परियोजना को कार्यान्वयन मा, HPP को पूरा बाहेक एक एल्यूमीनियम बोट Baguchanskogo निर्माण समावेश हस्ताक्षर गरे। दुवै वस्तुहरु को कोष पछि अफशोर कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन। यस्तो योजना अग्रसर समूह "Rusal" द्वारा चयन गरिएको छ।
यस अनुसार को जल कोड को Boguchany HPP संघीय सम्पत्ति छ। तसर्थ, निजी कम्पनीहरु को यस वस्तु मात्र निर्माण आर्थिक सहायता गरेका छन्। को भर राज्य द्वारा शुरू क्षेत्र को तयारी को लागि सबै लागत।
निस्सन्देह, यो महत्त्वपूर्ण सुविधा को निर्माण मा सबैले सजिलै चल्छ। को ANGARA नदी मा स्टेशन निर्माण विरुद्ध, विशेष मा, त्यो "तलवण्डी साबो को गियाना" advocated। यो चिरपरिचित पर्यावरण कम्पनी एक ठूलो वस्तु उहाँले जस्तै Boguchany को निर्माण, रूसी EIA प्रक्रिया आज अनिवार्य बिना गरियो भन्ने तथ्यलाई मन छैन। यद्यपि, "तलवण्डी साबो को गियाना" को दाबी स्टेशन निर्माण निलम्बित गरिएको छैन। HPP को पूरा को आयोजकहरु को EIA प्रक्रिया लागू कानून पारित गर्न नचाहनु बताए। को जलविद्युत परियोजना अन्तमा सोभियत युग समयमा स्वीकृत भन्ने तथ्यलाई। एक EIA निर्धारित आधुनिक कानून को मान्यता, कुनै retroactive प्रभाव छ।
र यो सुविधा को निर्माण बारे केही चासो रूस सार्वजनिक च्याम्बर व्यक्त गरे। संगठन, विशेष, प्रश्न बाढी को क्षेत्र मा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना र किसान क्षतिपूर्ति को गैर-भुक्तानीको छलफल अवस्थामा र विस्थापित आवास को विफलता बारेमा उठाएको छ।
निस्सन्देह, स्टेशन परियोजना को सोभियत ईन्जिनियरहरु द्वारा डिजाइन 25 वर्ष मा नैतिक अप्रचलित धेरै छ। तसर्थ, Boguchany जलविद्युत् बोट निर्माण को मुख्य आयोजक (वा बरु, आफ्नो लडी) - राव "रूस को UES" - 2006 मा, संस्थान "Hydroproject" यसको अद्यावधिक मा आचरण काम अह्राउनुभयो।
सुरुमा पनि माथि 4000 मेगावाट गर्न बिरूवा क्षमता तथ्याङ्कले उठाउनु मानिन्छ। तर, संस्थान को विशेषज्ञहरु को बाढी प्रवाह आवश्यकताहरु को ट्रान्जिट हाम्रो समय कडा कारण थियो जो पहिलो मस्यौदा छैन थप स्पिलवे नम्बर 2, डिजाइन थियो। फलस्वरूप, यस बोट गरेको क्षमता फेरि 3000 मेगावाट कम गर्न भएको थियो।
मिति, ANGARA मा नयाँ जलविद्युत प्लान्ट बिजुली पूर्ण 600 भन्दा बढी हजार उत्पादन जो नव अधूरा Boguchansky एल्यूमीनियम बोट, प्रदान गर्दछ। प्रति वर्ष गैर-फलाम धातु को टन। साथै, स्टेशन को Taishet बोट र तल्लो ANGARA क्षेत्र को धेरै अन्य औद्योगिक उद्यम गर्ने शक्ति पहुंचाता।
Boguchanskaya HPP बाढी क्षेत्र: क्षेत्र
जलविद्युत शक्ति स्टेशन को निर्माण को क्षेत्र को पारिस्थितिकी दुर्भाग्यवश, एकदम गम्भीर, परिवर्तन भएको छ। 296 कृषि योग्य भूमि, चराई र hayfields को km² - स्टेशन को पूरा सहित भूमि को 1.494 वर्ग किलोमिटर, भर भएपछि। रूखहरू र shrubs को नष्ट आपूर्ति 9.56 MCM3थियो। वन अर्को 10 लाख एम3स्टेशन को निर्माण को सुरुमा अन्तिम शताब्दीको 80 का तल कटौती थिए।
हाल, JSC «Boguchany HPP" को व्यवस्थापन पर्यावरण समस्या को सबै किसिमका बाँध निर्माण पछि खडा गरेको सहित हटाउन बाध्य। उदाहरणका लागि, अन्य पानी बीच बाढी क्षेत्रमा 96 मी2peatland गरियो। निस्सन्देह, यो अन्ततः नदीको प्रदूषण गर्न पुगे। केही wetlands (आफ्नो कुल क्षेत्र - 13 मी 2) संग एक धेरै हल्का सामाग्री रूपमा पीट बस सतहमा फ्लोट थाले। द्वारा environmentalists जारी सुझाव रूपमा यो नकारात्मक प्रक्रिया कम्तिमा अर्को 20 वर्षसम्म हुनेछ। हाल, नदी अनुकर्षण गतिविधिहरु र पीट द्वीप को समेकन शुद्ध गर्न समय समयमा आयोजना गरिन्छ।
क्षेत्र Boguchansky जलाशय 2326 मी2छ। यो एक ठूलो भाग क्रास्नायार्स्क क्षेत्र (1961 मी 2) मा स्थित छ। लम्बाइ Boguchansky जलाशय - 375 कि। यसरी आफ्नो पूर्ण मात्रा - 58,2 मी3र उपयोगी - 2.3 मी 3। जलविद्युत शक्ति स्टेशन निर्माण समयमा जलाशय को भरने दुई चरणमा स्थान लियो। 2012 मा, आफ्नो स्तर 185 मिटर को स्तर कम भएको थियो, र 2015-एम मा -। पार्श्व flowage - 208 मिटर परियोजना हाल Boguchansky जलाशय नदी प्रवाह र मौसमी को दैनिक विनियमन बाहिर छ। वर्ष भर मानिसले बनाएको समुद्र को स्तर मा उतार चढाव 1 मिटर भन्दा बढी छैन।
बाढी क्षेत्रमा मानव बसोबास
को Boguchany जलविद्युत् बोट निर्माण पानी 29 गाउँ र सहर लिए कि कारण थियो। को इर्कुत्स्क क्षेत्रमा - ती 25 क्रास्नायार्स्क क्षेत्र र4मा अवस्थित छ। सबै भन्दा ठूलो बन्दोबस्त भर छ Kezhma जिल्ला केन्द्र।
बाढी क्षेत्र को कुल 12173 व्यक्ति सरे। मान्छे को सबैभन्दा पछिल्लो शताब्दीमा भविष्यमा जलाशय इलाका बाट लिएको थियो। यस क्षेत्रमा 80 देखि वर्ष करिब 8,000 व्यक्ति resettled थिए। त्यतिबेला मानिसहरू नजिकका सहर र गाउँमा नयाँ घर दिइएको थियो। 2008-2011 मा। अर्को 4905 मान्छे भर क्षेत्र बाट पुनः स्थापित गरियो। यस समयमा, आवास मात्र शहर मा प्रदान गरिएको थियो। 2012 मा, एक नयाँ निवास 194 मान्छे, र पछि सारियो - थप 1,500।
कृषि योग्य भूमि र हजारौं लागि Inhabited ठाउँ छोड्न आवश्यकता को एक ठूलो रकम को हानि - त्यो केवल यस्तो नतिजा छ र बाढी परिणाम। Boguchany HPP तथापि, मिति, शक्तिको एउटा ठूलो रकम दिइएको, यो आवश्यक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था लागि हो। कुनै पनि मामला मा, यो कि यस महत्त्वपूर्ण सुविधा को निर्माण, बाध्य हानि बावजुद, आर्थिक जायज थियो विश्वास छ।
स्टेशन को तत्काल वरपर मा अरू सबै कुरा पनि एक ठूलो नयाँ शहर निर्माण गरे। ऊर्जा Kodinsk को taiga शहर बीच पुगेको नाम। यसको निर्माण 1977 मा सुरु भयो। मिति, यसको पूर्वी उपनगर को भर floodplain ANGARA देखि 8 किलोमिटर अवस्थित छ।
2016 मा Kodinsk मा, तथ्याङ्क अनुसार, त्यहाँ पहिले नै 16 227 मानिसहरू थिए। जलविद्युत नागरिकहरु बाहेक "गठबंधन यू" LLC, संयुक्त उद्यम "Biwa" मा र LLC "साइबेरियन DOZ +" को शाखा, स्थानीय काठ प्रशोधन उद्यम मा काम गर्ने अवसर छ। शहर सिनेमाहरू, विद्यालय, Kindergartens, विविध specializations धेरै पसलहरूमा छ।
पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक वस्तुहरु
इलाका मा गठन Boguchansky जलाशय बाढी पहिला ठूलो-मात्रा उत्खनन सहित सञ्चालन गरिएको छ। वैज्ञानिकहरूले भूमि को 40 हजार। किमी2अध्ययन र 130 भन्दा बढी पुरातात्विक साइटहरु वर्णन गरे। साथै, र एथ्नोग्राफिक सर्वेक्षण सञ्चालन गरेका थिए। बाढी क्षेत्र को फलस्वरूप काठ वास्तुकला को धेरै महत्वपूर्ण वस्तुहरू भोगे छन्।
जहाँ Boguchany जलविद्युत शक्ति स्टेशन स्थित?
Angarsk क्यासकेड यो जलविद्युत् बोट सुरु र यसको चौथो कम चरण हो। अलग भएको Boguchany को अपस्ट्रिम Ust-एलियास स्टेशन बाट पनि ब्राट्सक र इर्कुत्स्क छन्। यो जलविद्युत् बोट Kodinsk नदी स्टेशन मा स्थित छ। यो बिन्दुमा ordovika र sedimentary चट्टानहरु को Angar ठूलो चट्टान massif प्रतिच्छेदन Cambrian अवधि। नदी चौडाई को जलाशय को स्तर मा 2-3 मी छ। खाट गर्न अनुकूल यो ठाउँमा रक्स धेरै नजिक छ। बायाँ बैंक मा सानो terraces छन्। साँच्चै यो धेरै ठाडो र precipitous छ। आफै मा शट लागि (downstream) Angar 10 मी विस्तार।
क्षेत्र को पारिस्थितिकी मा प्रभाव
अन्य कुनै पनि जलविद्युत् बिरुवाहरु जस्तै Boguchany वातावरण मा एक विशाल प्रभाव छ। यो क्षेत्र को स्टेशन को निर्माण पछि वातावरण महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भइरहेको छ। पनि taiga नदी शताब्दीयौंदेखि यहाँ अस्तित्व छ भनेर परिदृश्य, ज्यादातर ताल गर्न सारे। यो, बारी मा, rheophilous संख्या मा एक महत्वपूर्ण कमी (छिटो पानी रुचि) माछा प्रजाति गर्न पुगे। तर, यो मामला मा, भाग्यवस, यो limnophilic (ताल) को जनसंख्या गर्न हुर्किसकेका छ।
जलाशय मा पानी को गुणवत्ता Ust-Ilimskoy HPP माथि स्थित बाढी क्षेत्रमा एक शुद्धता द्वारा मुख्य रूप निर्धारण गरिन्छ। यो अवस्था कारण यो स्थान मा कम inflow ANGARA छ। environmentalists को आश्वासन, जलाशय काठ र एक पप-अप टर्फ को तल rotting, पाठ्यक्रम, पानी प्रभाव गुणस्तर मा। तर, यो मामला मा कुनै पनि पर्यावरण प्रकोप लागि, भन्नु, को पाठ्यक्रम, यो आवश्यक छ।
जलाशय वरिपरि 6-8 मी, अन्य कुराहरु एक बिट र जलवायु परिवर्तन भएको छ। पानी को एक ठूलो रकम मौसम "अवशोषित"। वस्तु को वरपर मा गर्मी अलि कूलर थियो, र गिरावट मा - न्यानो। कारण तल HPS नदी मा पानी को छुट्टी गर्न लामो चिसो लेन देखियो। यो घटना को मुख्य नकारात्मक परिणाम पनि न्यानो महिनामा क्षेत्र मा कुहिरो दिन को वृद्धि भएको छ।